Nadiifiye abuur, ka saara dhagaxa, kala saara cufisjiida - SYNMEC
nadiifinta abuur wanaagsan
abuurka nadiifiyaha & grader
kala soocida cuf-isjiidadka
mashiinka polishing digirta
wiishka iyo gaadiidka qaada
5XZC-7.5DS Nadiifiyaha Abuurka & G...
Nadiifinta iyo farsamaynta abuur
5X-12 nadiifiye shinni / hadhuudh s...
5XWY dhererka dhululubada goglan
5XZC-L Nadiifiyaha Abuurka Shaybaadhka &...
Paddy abuur warshadeedka grai...
Hadhuudhka goosashada ka dib wuxuu ka koobnaan doonaa wasakh badan oo kala duwan, sida boodhka, cawska, dhagaxa, carrada, iwm.
Waa maxay habka shaqada ee mashiinka nadiifinta hadhuudhka?
Adigoo ah Nadiifiyaha Abuurka iyo Soosaaraha Darajada, kula wadaag
Wax kasta oo ay tahay inaad ka ogaato Kala soocida Cufisjiidhka
Dhammaanteen waan ognahay in mar kasta oo miisaankiisu sarreeyo, uu bato heerka biqilka, firfircoonida iyo dhalidda. Sidaa darteed, kala-soocida cuf-jiidadka ayaa door muuqda ka ciyaara qiimaynta miraha miisaan ahaan warshadaha warshadaynta abuur. Haddaba intee in le'eg ayaad ka taqaannaa kala-saareyaasha cufjiidadka? Waa maxay Kala-duwayaasha Cufis-jiidadka?...
U fiirso waxyaalahan ka hor intaadan isticmaalin mashiinka nadiifinta hadhuudhka
Mashiinka baarista hadhuudhka ayaa ah qalab lagama maarmaan u ah wax soo saarka beeraha ee casriga ah, waxaana inta badan loo adeegsadaa baaritaanka, kala saarista iyo nadiifinta wasakhda ah ee qamadiga, galleyda iyo miraha kala duwan. Adigoo ah Nadiifiyaha Abuurka iyo Soosaaraha Darajada, kula wadaag Marka xigta, aan ka hadalno arrimo dhowr ah...